Kitty For Me: May 2007
Sin Pauk - Min Ta Youk Hte`
qifayguf - rif;wpfa,mufxJ
ig[m rsufpdrdSwf acgif;ndwfvdkufr,f
rif;ESKwfu xGufuswJU pum;vHk;wdkif;yJ
ig[m owdvufvGwf toufatmifUrdw,f
rif;ESKwfcrf;u tjyHK;wdkU awGUvdkufwkdif;yJ
igU&JUb0 tm;vHk;[m rif;wpfa,mufxJyJ
wpfaumufaumufeJU apmifUa&SmufvdkU puúefUwdkif;tjrJ
tjrJwrf;yJ rif;bufu &yfzdkUtwGuf
ကဲကဲ...ဒါလေးတွေ စားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကို သွားနော်။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာ။
World's Largest Liger တဲ့။ ချစ်စရာကြီး။ သူငယ်ချင်းကမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးတာ။ ၀တုတ်နေတာပဲ။ ခြင်္သေ့အထီးနဲ့ ကျားမ နဲ့စပ်ထားတာတဲ့။ ကျားနဲ့ပိုတူသွားတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေါ်က ကျားတို့ သင်္ကေတ အစင်းကြောင်း တွေတော့ ပျောက်သွားတယ်။ အစင်းလေးတွေတော့ ရှိသေးတယ်။ အနက်စင်းတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျားနဲ့ သိပ်မတူပဲ ကြောင်နဲ့ပိုတူနေသလားလို့ (ကြောင်ချစ်လို့လားတော့မသိဘူး)။ တစ်နေ့ကို အသားပေါင် ၂၀ ဆိုတော့ တော်တော်ကျွေးရမယ်နော်။ သူ့ကိုကျွေးပြီးတော့ ကိုယ်ကတော့ ဘေးကနေ သွားရေကျနေရမလား မသိဘူး ဟီးဟီး။
Ratatouille - Ratatoo ee
ဒီကားလေးကြည့်ချင်တယ်။ ကြွက်ကလေးက ချစ်စရာလေး။ ဟင်းချက်တတ်တဲ့ ကြွက်ကလေးနဲ့ ဟင်းမချက်တတ်တဲ့ စားဖိုမှူးကောင်လေး။ ကြွက်ကလေးက ဘယ်လိုများ သူ့ကို သင်ပေးမလဲ မသိဘူး။ ဂျွန်မှ ရုံတင်မယ်တဲ့။
ကားဂိတ်ရောက်ခါနီးမှာ ဖိနပ်ပြတ်တယ်။ အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ရတယ်။ စီးရမယ့် ဘတ်စ်ကားက မလာဘူး။ စောင့်တယ်။ ဆက်စောင့်တယ်။ မလာဘူး။ တစ်ခြားကားနဲ့ လိုက်ရတယ်။ BigC မှာဆင်းတော့ ကားသမားက ကားဂိတ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရပ်ပေးတယ်။ ဒါနဲ့ ကားဂိတ်ဆီ အမြန်ပြန်ပြေးရတယ်။ နောက်တစ်ကားပြောင်းစီးတော့ နေရာက မရပြန်ဘူး။ နာရီဝက်လောက် မတ်တတ်ရပ်လိုက်ရတယ်။ Mochit ရောက်တော့ ကားသမားက ထုံးစံအတိုင်း မှတ်တိုင်ကျော် ပြီးတော့ ကိုးလို့ကန့်လန့် လမ်းလယ်မှာရပ်ပေးပြန်တယ်။ တောက်...စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ မနက်ခင်း။ အိမ်ကထွက်လာတာ ၇ နာရီခွဲ။ ရုံးရောက်တော့ ၁၀ နာရီ ထိုးခါနီးပြီ။ ရုံးချိန်က မနက် ၉ နာရီ။
Laugh (The Best Medicine For You)
သူငယ်ချင်းဆီကရတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ။ မရီဖြစ်ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးမိမှာပါ။ Teacher: History isavery interesting subject. It
tells you about what
Student: Please teacher, I don't think I want to
Teacher: Ted, if your father has $10 and you ask him
for $6, how much
Mother: You really disappoint me. Your results are
Mother: I know that. But I am going to Hong Kong
tomorrow, so I am
Son: On Tuesday, she said 4+4=8 And on Wednesday, she
If she can't make up her mind, how do I know the
A mother and son were doing dishes while the father
watching TV in the living room. Suddenly, there was a
loud crash of
then complete silence. The daughter turned to look at
Waiter: I've stewed liver, boiled tongue and frog's
Customer: Don't tell me your problems. Give me the
Teacher: Simon, your composition on "My Dog" is
Posted by Me at 3:42 AM4comments:
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်အကြိုက် မြန်မာသီချင်းတွေနဲ့ သူတို့မူရင်းသီချင်းလေးတွေပေါ့။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို လုံးဝမကြိုက်ပေမယ့် ဒီတစ်ခါ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ့အမုန်းကျိန်စာ အခွေထဲက ဆုံဆည်းရာ သီချင်းကို သဘောကျမိတယ်။ လိုက်ဆိုလို့လဲ ကောင်းသလိုပဲ။ သူ့အသံကလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူရင်းနဲ့ တွဲနားထောင်လိုက်ရင်တော့ မူရင်းကို မမှီပါဘူး။ သူ့အသံနဲ့တော့ လိုက်ပါတယ်။
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - ဆုံဆည်းရာ Bring Me To Life
နောက်ပြီးတော့ မျိုးကြီး ရဲ့ အဆိပ်ခွက်။ တအားကြိုက်တယ်။ ကော်ပီဆိုထားတယ်လို့တောင် မထင်မိဘူး။ နောက်တော့မှ ကော်ပီသီချင်းမှန်းသိရတယ်။ မျိုးကြီး ဆိုတာ ပိုကောင်းသလိုပဲ (ဟီး..နားလည်လို့နေမှာပေါ့)။
မျိုးကြီး - အဆိပ်ခွက် Man Against The World
ရှင်ဖုန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာ..အဲဒီသီချင်းလေးလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလဲ ကော်ပီသီချင်းဖြစ်နေပြန်ရော။
ရှင်ဖုန်း - ကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာ Proud of You
ဟားဟား 9mm ရဲ့ ချစ်ခဲ့ပြီးမှ...သူတို့လဲ ကော်ပီဆိုမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ ကော်ပီမှ ကိုရီးယားသီချင်းကို ကော်ပီလုပ်ထားတာ။ မူရင်းလဲ နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ မူရင်းသီချင်းနာမည်တော့ မသိဘူး။ ဆိုတဲ့အဖွဲ့က တော့ People Crew။
9mm - ချစ်ခဲ့ပြီးမှ People Crew's Song
ိစိုင်းစိုင်းရဲ့ အိုမေမေ သီချင်းကလဲ ကိုရီးယားသီချင်းကော်ပီပဲ။ GOD အဖွဲ့ရဲ့ To Mother ကို ကော်ပီကူးထားတာ အင်း...ကိုရီးယားလိုများ နားလယ်နေသလားမသိဘူးနော်။ မျက်နှာလိုက်ပြီးပြောရရင် စိုင်းစိုင်းဆိုထားတာ ပိုကြိုက်တယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် - အိုမေမေ GOD - To Mother
Wanna live there !!
haha !! I want to live there.
I don't want to live in this live. I'm not happy today. I don't want to happen like this.
စိတ်ညစ်တယ်။ မျှော်လင့်ထားတာတွေက ဖြစ်မလာတတ်ဘူး။ မျှော်လင့်ထားတာတွေသာ ဖြစ်မလာရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ဘယ်လမ်းကို ရွေးမလဲ။ မျှော်လင့်ထားတာတွေက ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာလဲ။ ဒီဘ၀မှာ ဖြစ်လာဦးမှာလား။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ရှေ့ကိုတွေးလိုက်ရင် ဘာမှ ရေရေရာရာမရှိဘူး။ ဒီလိုပဲ ဘ၀ကြီးကို အဆုံးသတ်ရမှာလား။ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာလို့ကတော့ စောစောစီးစီး သေတာပဲအေးတယ်။ အခု သိပ်ပျော်နေတယ်လို့ ထင်နေလား။ ရုံးမှာ သိပ်အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်နေလား။ ရုံးသွားရတာ သိပ်သက်သာနေတယ်လို့များ ထင်နေလား။ တစ်ခါတစ်လေ သိပ်စိတ်ပျက်တယ်။ လာမိတာမှားတယ် လို့ခံစားရတယ်။
Posted by Me at 7:40 AM2comments:
The CV of the Year
ဒီ CV လေးကို တော်တော်သဘောကျတယ်။ ရီရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအလုပ်ရသွားတယ်နော။ ရိုးသားလို့တဲ့လေ။
This is an actual job application thata17-year-oldboy submitted ataMcDonald's restaurant in Florida; and they hired him because he was so honest and funny!
DESIRED SALARY: $185,000ayear plus stock options anda Michael Ovitzstyle severance package. If that's not possible, makean offer and we can haggle.
MOST NOTABLE ACHIEVEMENT: My incredible collection ofstolen pens and'post-it' notes.
PREFERRED HOURS: 1:30 - 3:30pm., Monday, Tuesday and Thursday.
MAY WE CONTACT YOUR CURRENT EMPLOYER?: If I had one,would I be here?
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE DOING IN FIVE YEARS?: Living in the Bahamas witha fabulously wealthy dumb blond supermodel who thinks I'm the greatestthing since sliced bread. Actually, I'd like to be doing that now.
DO YOU CERTIFY THAT THE ABOVE IS TRUE AND COMPLETE TOTHE BEST OF YOUR KNOWLEDGE?: Yes. Absolutely.
Posted by Me at 2:38 AM 1 comment:
ဒီနေ့ ဘန်ကောက်မှာ ငလျင်လှုပ်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရည်မွန်တို့ ရုံးဘက်မှာ လှုပ်သွားတာ။ ရုံးက လေယာဉ်ကွင်းအဟောင်းဘက်နဲ့ နီးတယ်။ ချက်ခြင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့ သူတို့ဘက်တွေမှာ မလှုပ်ဘူးတဲ့။ အစက ခေါင်းမူးတယ်ထင်နေတာ။ ခန်းဆီးတွေလဲ ခါရမ်းနေတာပဲ။ နောက်တော့မှ ငလျင်လှုပ်တယ် ငလျင်လှုပ်တယ် ဆိုပြီး အားလုံးက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြရော။ ခဏနေကြတော့ တစ်ခါထပ်လှုပ်ပြန်ရော။ ပထမတစ်ခါလှုပ်တုန်းက တစ်ရုံးလုံး ဘာမှမလုပ်ကြသေးဘူး။ ဒုတိယတစ်ခါလဲလှုပ်ရော တစ်ရုံးလုံး အောက်ဆင်းပြေးကြရော။ ရုံးကလဲ တစ်ရုံးလုံး အပြင်ထွက်နေပါလို့ ကြေငြာတယ်။ နာရီဝက် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အပြင်မှာ ရပ်စောင့်နေရတယ်။ ညနေ ၅ နာရီလဲထိုးရော ရုံးက အားလုံးကို ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပျော်ပျော်ကြီး ပြန်လာရတာပေါ့။ ငလျင်က ရန်ကုန်မှာလဲ လှုပ်သွားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ လာအိုမှာလဲ လှုပ်တယ်လို့ ရုံးမှာတော့ ပြောနေကြတာပဲ။ ဒါကတော့ ချင်းမိုင်မှာ လှုပ်သွားတဲ့ ငလျင်သတင်းပါ။
ငလျင်လှုပ်တော့ အားလုံးအောက်ဆင်းလာကြရရော။ ဟိုနားစုစု..ဒီနားစုစုနဲ့ပေါ့။ ပြန်ဖို့လုပ်တဲ့ သူကလုပ်။ အပေါ်မော့ ကြည့်တဲ့သူက ကြည့်။ ပျော်စရာကြီး။ ဘာမှ မဖြစ်လို့တော်သေးတယ်။
Posted by Me at 7:17 AM2comments:
အခုလောလောဆယ် အကြိုက်ဆုံးမင်းသားကတော့ Wentworth Miller ပဲ။ Prison Break ကြည့်ပြီးတော့ အရမ်းကို ကြိုက်သွားတာ။ သူ့ကို ကြိုက်လို့ Prison Break Season 1 ကို ၂ ရက် Season2ကို ၂ ရက် ပြီးအောင်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ လူလဲ မူးနောက်သွားတာပဲ။ ည ၁၀ နာရီလောက်က စကြည့်တာ မနက် ၅ နာရီလောက်ထိကြည့်။ နေ့လယ် ၁၂ နာရီလောက် အိပ်ရာကပြန်ထပြီး နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခါပြန်ကြည့်။ ဇာတ်လမ်းကိုလဲကြိုက် မင်းသားကိုလဲကြိုက်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်လုံးကြိုက်ကြတယ်။ ကဲကဲ..ဒါကတော့ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ သူ့ပုံလေးတွေပေါ့။
Favorite Picture gif Wallpaper
Posted by Me at 3:09 AM5comments:
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်အကြိုက် မြန်မာသီချင်းတွေနဲ့ သူတိ...
Crystal Piano တဲ့..ကွဲသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..တစ်ချ...
Jun Jin - Even If It's A Thousand Times
Lonely Man Bed Sheet